Posted by Rob Y. May 1, 2014 · Leave a Comment
Amin'izao lahatsoratra teo aloha no nanarona crank tranga menaka maotera, ny fomba hanamarina azy, ary inona no mba hitady. Amin'ity lahatsoratra ity isika dia handrakotra mijery fifindran'ny ranoka, ary inona no mba hitady.
Manaraka ny maotera menaka, fifindran'ny menaka angamba no zava-dehibe indrindra manaraka ranoka. Zava-dehibe ho an'ny fampitana mandeha ho azy ho manana ny araka ny tokony ho haavon'ny mba ho azy ireo ny miasa tsara, ary manana ny fifindran'ny fanovana araka ny tokony ho ela velona sy hiantohana.
Ny zavatra voalohany ataontsika dia mandeha mialoha sy hijery ny ranon anivon'ny ny fifindran'ny. Toerana ny mandroboka tapa-kazo sy nampakatra izany tsy misy ny fiara hazakazaka. Indraindray dia misy toromarika momba ny mandroboka tsora-kazo ny fomba hanamarinana ny tsiranoka. Tadiavo koa ao amin'ny tompony boky raha misy iray, ny toromarika dia tokony ho hita eo ambanin'ny tsiranoka. Tena mpanamboatra milaza fa ny fiara tokony ho mafana, maotera nifamoivoy sy amin'ny tsy miandany. Hamafa eny ny dipstick sy ampidiro indray izany ka misintona azy avy indray ka jereo fa ny ranoka ao amin'ny soso-kevitra fetra. Ary manimbolo ny tsiranoka, tsy tokony hanana dorana fofona. Fampitana ny ankamaroan'ny tokony hanana mena Tint ho azy koa fa tsy ho tanteraka mainty (izany dia miankina amin'ny fomba avo ny mileage eo ny fiara).
Miaraka amin'ny fiara vaovao, ny fifindran'ny dia voaisy tombo-kase tanteraka vondrona, izay midika fa tsy afaka manampy na dia hijery ny tsiranoka. Raha ireo fiara sy ny fiara izay azonao atao ny manamarin mitovy, dia fahazoan-dalana fa mandeha mialoha sy handroaka ny fiara. Raha ny fiara tsy miraika, raha mitondra fiara ianao, raha mahita ny fiara no miovaova hampandeha tsara. Tiantsika hanao izany fomba roa. Iray, avy mijanona mihitsy ianao, moramora manome azy mihoatra throttle toy ny amin'ny toe-piainana ara-dalàna mitondra fiara. Faharoa, avy mijanona mihitsy ianao fanesorana mafy kokoa sy haingana kokoa. Ny rpms amin'ny ankapobeny dia handeha kely ambony teo anoloan'ny maotera miova rehefa mizaha toetra izany. Raha manana ny tompon'ny fiara ao amin'ny ny fiara dia azonao atao ny hamela azy ireo hahafantatra ny zavatra ataonareo alohan'ny tanana ka tsy manana ny aretim-po, ary mihevitra ianao miezaka hamiravira ny ny fiara. Rehefa tsy miraika ny fifindran'ny fotoana iray dia manao izy ka tsy manilika hampandeha tsara. Jereo mba hahitana raha ny rpms (maotera revolisiona isa-minitra) dia mihazakazaka avo sy ny maotera no miasa mafy teo anoloan'ny fampitana mpiasa miasa. Koa raha tsara ny fiara sy ny mafana, handray an-tsoratra indray ny fomba ny fiara no miovaova.
Manova fifindran'ny ranoka dia tsy zavatra natao izay tsy tapaka nataony toy ny fanovana ny maotera menaka. Na izany aza, dia tokony hovana araka ny mpanamboatra tolo-kevitra. Vaovao izany dia tokony ho voatanisa ao amin'ny tompony boky fampianarana, ary manantena ny mpivarotra iray manana. Isika tsy be mpankafy ny rafitra izay hanova ny fifindran'ny ranon-javatra amin'ny alalan'ny fanaovana izany ny fenoy fantsona. Misy fiovana menaka toerana manao izany, Ary izahay efa nahita izay rehefa nataony izany, rehefa misy fiara manana 100,000 kilaometatra eo amboniny no nanao loza mihoatra noho ny tsara. Rehefa avy nanao ny fiara izany dia tsy manilika tsara. Foana ny manontany ny tompony, raha efa nanana ny fifindran'ny serviced sy ny fomba dia serviced sy izay. Isika fahazoan-dalana raha ny ranoka tsy maintsy ovana mandeha mialoha ary milatsaka ny fifindran'ny vilany ary ny fanovana ny sivana.
Farany, Foana ve Ianao haka ny fiara izay mihevitra ianao mividy ny mpanamboatra voamarina mba hanome azy io ho indray mandeha eo alohanareo mividy. Tokony ihany koa ny hahazo fiara toe tatitra mba hahitana raha manana ny fiara fanompoana firaketana an-tsoratra azo avy amin'ny mpivarotra. Rehefa fiara dia serviced tao amin'ny mpivarotra matetika izy ireo tatitra ho an'ny fiara lehibe toe tatitra orinasa sy manampy foana firaketana ny tolotra rehetra voasoratra natao tamin'ny fiara.
Tags: nanamarina fifindran'ny, nanamarina fifindran'ny ranoka, fiara toe tatitra